I-Lenovo isungula i-Tab 4 ngeendaba ezikumgangatho wehardware | Iindaba zeGajethi
I-Lenovo isungula i-Tab 4 ngeendaba kwinqanaba lehardware
UMiguel Hernandez | | amacwecwe, Umnxeba
Ihlabathi lamacwecwe liya lisala lingenanto, nangona kunjalo kukho iimveliso ezithile ezinje ngeApple, Samsung kunye neLenovo eziqhubeka nokugcina iziphumo zentengiso, kuba uninzi lwetotali ziwela kubo. Ngeli thuba, inkampani yaseTshayina igqibe kwelokuba isungule iipilisi ezintsha kwintengiso ngeendlela ezahlukeneyo, oko kukuthi, ukugcina ubungakanani obungenakuba bukhulu kakhulu. Sinikezela ngeLenovo Tab 4, ithebhulethi entsha yohlobo lwesiTshayina olujolise ekuvuseleleni imakethi encinci ekwehleni.
Mhlawumbi kukho into enzima kule ndawo, kodwa qhubeka uzama kwaye unikezele ngamaxabiso okhuphiswano yindlela elungileyoAmacwecwe, ngaphandle kokuncitshiswa kwentengiso yabo kwiminyaka yakutshanje, ayimveliso eluncedo kakhulu kweziphi iimeko ukuba uyazi ukuba ungazisebenzisa njani.
Into yokuba ithebhulethi enexabiso eliphantsi isenokuba sisizathu sayo, Kungenxa yoko le nto iLenovo Tab 4 iza neyona ibalulekileyo, ukhetho oluninzi, kakhulu kangangokuba phakathi kweenguqulelo ezine onokukhetha kuzo, siya kuba nemodeli ye-intshi ezisibhozo, eyona ixhaphakileyo ukusebenzisa umxholo, kunye nenye imodeli ye-intshi ezilishumi apho sinokuthi siye khona sisebenze ukwenza umxholo ukuba izixhobo zekhompyutha ziyasivumela.
Imodeli ye-intshi ye-10 iya kuqala ukusuka kwipaneli ye-FullHD ene IQualcom Snapdragon 625m kunye ne-cores ezisibhozo (phakathi kuluhlu) ukuya kuthi ga kwi-4I-GB ye-RAM ihamba ne-64GB yokugcina. Ngaphezulu kokwanele ukuba nexesha elimnandi, ngakumbi ukuba sicinga ukuba siya kuba nakho ukwandisa ubungakanani ngekhadi le-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-128GB. Siyakhumbula ukuba iikhamera zezona zibaluleke kancinane kolu hlobo lwemveliso, yiyo loo nto ine-5 Mpx ngaphambili kunye ne-8 Mpx ngasemva, ihamba ne-7.000 mAh yebhetri eqala nge-280 euros, ixabiso elikhuphisanayo elinomgangatho oqinisekileyo.
Kwelinye icala sinenguqulo ye-8-intshi Kwakhona i-HD epheleleyo enezixhobo ezifanayo kodwa nge-4.850 mAh ibhetri, mhlawumbi isikwe kakhulu kwi-intshi ezimbini kuphela. Zonke iitafile ziza nonxibelelwano lwejack ye-3,5 mm njengokuphuma komsindo kunye nenkqubo yokunxibelelana kwe-USB-C eya kuba yindawo entle ngokunxulumene nezixhobo zonxibelelwano kunye nokunxibelelana nezinye iintlobo zezixhobo.
Ukuba ujonga ukonga, zombini iipilisi ziya kuba nohlobo lwe-2GB ye-RAM, iikhamera ezifikelela kwi-5 Mpx kunye neprosesa yeQualcomm Snapdragon 425., apho kuya kufuneka sizilinganisele ekusebenziseni umxholo kwaye sisebenzise ukonga ibhetri. Amaxabiso asezona zixabiso liphantsi aya kuba phakathi kwe- $ 180/200. Iyafumaneka ukusukela kule nyanga ka-Okthobha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » amacwecwe » I-Lenovo isungula i-Tab 4 ngeendaba kwinqanaba lehardware